ဘဝမှတ်တိုင်: "ငပိန်ရဲ့ သင်္ကြန်" ဂိမ်း ထွက်ပါပြီ!!!
"ငပိန်ရဲ့ သင်္ကြန်" ဂိမ်း ထွက်ပါပြီ!!!
"ငပိန်ရဲ့ သင်္ကြန်" ဂိမ်း ထွက်ပါပြီ!!! TGP ရဲ့ နှစ်သစ်မင်္ဂလာ လက်ဆောင်အဖြစ် http://bit.ly/thingyan2014 မှ အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလို့ ရပါပြီ။ ပြီးရင် Rating နဲ့ Review လေးလဲ ရေးပေးပါအုန်း ခင်ဗျာ။ နောက်ပြီး ဒီ Post လေးကို Share လုပ်ပြီး အခြား သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ အကြောင်းကြားပေးပါအုန်းနော်။ အားလုံးကျေနပ်မဲ့ ဂိမ်းလေးဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/20/2014 09:59:00 pm